Ruta | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ihe bụ mgbọrọgwụ bara uru: iji ọgwụ na-eme ihe na ọgwụ na nkà mmụta ọgwụ
Herb Ruta na-esi ísì utọ nwere nnukwu ihe - dịka ọgwụ, na dịka nsi, nakwa dịka ihe si nri. N'isiokwu a, ị nwere ike ịmụta ihe niile banyere mgbọrọgwụ na ihe ngosi maka ojiji. Anyị ga-agwakwa gị gbasara njirimara nke nchịkọta nke ọgwụ ọgwụ a na contraindications. Ruta: nkọwa nke osisi ọgwụ. Ogwu nke rue na ihe ngwọta ya maara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla, yana foto nke osisi osisi a.
Ugbo nke rue: kuru ma lelee ubi
O siri ike iche n'echiche na onye amaghị banyere osisi dị otú ahụ dịka mgbọrọgwụ. Akụkọ ya na-alaghachi azụ ọtụtụ puku afọ, n'oge a kwa, a na-ejikarị ya na nkà mmụta ọdịnala na ná ndụ kwa ụbọchị. Ugbu a, ifuru a na-eji ya eme ihe na nri, ọgwụ, na ụfọdụ antidotes na-akwadebe ya. Ọ na-eburu ebe nsọpụrụ na nkà mmụta ọgwụ nke oge a.